Ngingagijima yini i-SEO elula yebhizinisi lami lebhizinisi ukwenza konke ngedwa?
Ukuba yi-solopreneur yanamuhla nokusebenzisa ibhizinisi lakho ku-intanethi kuhlale kunzima, kufanele ngivume. Nsuku zonke kunemisebenzi eminingi enomsebenzi elinde ukunakwa kwakho ngokuqondile, ungakhulumi ngokusebenza kwe-injini yokusesha, eyaziwa ngokuthi ukwenza isikhathi esiningi nokukhandla. Ngakho-ke, kungenzeka yini ukugijima isu elula se-SEO esisebenza kahle ebhizinisini lakho elincane le-intanethi? Ake sibone.
Ngaphambi kokuba siqale, kufanele ubhekane nakho - ukuqhuba kahle kahle umsebenzi ophelele nesikhathi eside. Ngisho lula SEO isu kuyinto marathon, kunokuba sprint. Yebo, uzothola isethi yamathiphu ahloliwe ukuze uthuthukise izikhundla zekhasi lakho ohlwini lwe-Google lwemiphumela yokusesha - used boats appraisal. Kodwa ugcine engqondweni - ngeke kube nemiphumela esheshayo noma ukuthuthukiswa okusheshayo. Akufanele ulindele, ukuthi ziqondile. Vele uqhubeke usebenza, futhi ngiyaqiniseka ukuthi uzolandela izimpawu zokuqala zokuqhubeka kwakho.
I-SEO elula kubanikazi bebhizinisi be-solo
Okokuqala, ukumaketha kokuqukethwe kanye ne-SEO yezobuchwepheshe njalo kuza ngezandla. Yingakho ukuba nokuqukethwe kwekhwalithi kumakhasi akho wewebhu kuyisisekelo se-backbone, ngokuvamile esinquma ukuthi iwebhusayithi yakho isabelwe kusukela ekuqaleni. Ngincoma lapha ukwenza lokhu okulandelayo:
Yakha okuqukethwe okuphezulu, okufanelekile kokubili emigomeni yakho yamanje yebhizinisi, namathemba.
Yenza yonke imibhalo yakho ibe yusizo, ifundise futhi ikhuthaze ngangokunokwenzeka
Yakha imibhalo yakho ngendlela enomusa, yenza yonke into elula, ecacile futhi elula ukufunda
Ukuze okuqukethwe kwakho kugcwaliswe ngokulungile amagama angukhiye kanye nemishwana ebalulekile, uzodinga ukusingatha ucwaningo lwegama elingukhiye. Kodwa ungesabi - akuwona umsebenzi okhandlayo uma kwenziwa ngethuluzi elifanele. Ngaleyo ndlela, uzokwazi ukuthola amagama angukhiye asemqoka amakhasimende akho angase asebenzise kakhulu ekusesheni. Umqondo oyinhloko lapha mayelana nokuthola amagama angukhiye afanele, okuvela kaningi ekusesheni kwanyanga zonke, kodwa ngaphandle kokuncintisana kakhulu ngesikhathi esisodwa.
Londoloza ukulinganisa igama elingukhiye. Gcina okuqukethwe kwekhasi lakho kugcwele ngamaphesenti angaba ngu-2-3 ngokwesilinganiso. Kodwa ungalokothi uhlukunyezwe ngokugxilisa amagama angukhiye amaningi nje ngokuwabeka ngokungahleliwe. m Lokhu akusebenzi. Ngaphezu kwalokho, ngokuqinisekile uzothinta izinga lakho lokuqukethwe, okuholela ekuthuthukisweni okuphansi kakhulu (uma kungenjalo).
Unganqikazi ukuba negama elingukhiye noma ibinzana elilodwa elibalulekile lombhalo omude elifakiwe kuwo wonke ama-URL webhusayithi. Ukwenza kanjalo, uzothola ukuhamba kwe-user-friendly, uhlanganyele izivakashi eziningi ukuze wabelane ngokuqukethwe kwakho, futhi wenze zonke ikhasi libukeke kangcono ukukhomba. Konke kokukodwa.
Sebenzisa izinhlaka zomphakathi ezithandwa kakhulu (njenge-Facebook, Twitter, Instagram, njll.) ukuze ube ne-inthanethi enamandla nakakhulu negunya lewebhu lewebhu. Ukwenza kanjalo, uzothumela isignali enhle kakhulu ku-Google nakwezinye izinjini zokusesha ozifanele ukulinganisa eziphezulu. Ungasho ukuthi ungahlanganyela emgwaqweni omkhulu ovela emithonjeni yezokuxhumana.